यसकारण मान्छे चन्द्रमामा पुगेका छैनन् | - ज्ञानविज्ञान
सन् १९६९ जुलाई २० मानव इतिहासका लागि निकै खास दिनको रूपमा मान्छौ । यो दिनमा मानवले पहिलोपटक चन्द्रमामा पाइला टेकेको इतिहास छ । अन्तरिक्ष यात्री निल आर्मष्टंगले चन्द्रमामा पहिलोपटक पाइला चालेको इतिहास हामीले पढ्दै आएका छौ ।
तर, केही विशेषज्ञहरू भने यसलाइ मान्न तयार छैनन् अर्थात् निल आर्मस्ट्रंगले पहिलोपटक चन्द्रमामा पाइला नटेकेको दावी गरेका छन् । केही एयरोनेटिकल इन्जिनियरहरू तथा केही अमेरिकी सैनिक पाइलटहरूले पनि यस कुरालाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरूले निल आर्मष्ट्रंगले चन्द्रमामा पाइला टेकेको कुरालाई शतप्रतिशत झुठ भएको दावी गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार अमेरिका रूसले पहिलोपटक अन्तरिक्षमा मानव पठाएको कुराबाट निकै रिसाएको तथा ईर्श्या गरिरहेको थियो । सोही ईर्श्यालाई मेटाउनका लागी अमेरिकाले एक स्टुडियोमा चन्द्रमामा पुगेको नाटक रचेको समेत दावी विशेषज्ञहरूले गरेका छन् र त्यहाँ खिचिएका तस्विरहरूको अध्ययनबाट यसलाई पुष्टी समेत गरेका छन् ।
उनीहरूले त्यहाँ लिइएका तस्विरहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरेर निल आर्मष्ट्रंगले चन्द्रमामा पाइला टेकेको कुरालाई गलत साबित गरेका छन् ।
केहि फोटो जस्ले अमेरिका चन्द्रमामा पुगेको कुरा झुटो साबित गर्दछ |
चन्द्रमामा पाइला टेकेको भनेर देखाइएको एक तस्विरमा अमेरिकी झण्डा चन्द्रमामा गाडिएको देखाइएको छ । निल आर्मष्ट्रंगसँगै रहेको उक्त झण्डा फहराइरहेको कारण विशेषज्ञहरू यो झण्डा चन्द्रमामा नरहेको बताउँछन् । चन्द्रमामा हावा नबहने भन्दै उनीहरुले उक्त झन्डा हावामा फहराइरहेको भन्दै यो एउटा झुठ भएको बताएका छन् ।
2.फोटो कस्ले खिचिदियो
आर्मष्ट्रंगले लगाएको हेलमेटमा देखिएको दृश्यमा समेत फोटो खिच्ने कोही पनि नदेखिएको बताएको छ । यता नाशाले आफ्नो बचाउ गर्दै अर्का अन्तरिक्ष यात्रीले तस्विर खिचेको र हेलमेटमा नै क्यामरा जडान गरिएकाले उक्त तस्विर खिचेको जस्तो नदेखिएको बताएको छ ।
३.तारा हरु खोइ त
चन्द्रमामा बायुमंडल(बादल) छैन भनिएको छ | आकाशमा ताराहरु देखिनुपर्ने भएपनि कालो भन्दा अरू केही देखिएको छैन् । यता नाशाले भने चन्द्रमाको सहत सूर्यको प्रकाशले चम्किलो भएको कारण त्यहाँबाट तस्विर देख्न मुस्किल भएको बताएको छ ।
४.छायाँ को दिसा किन फरक
तस्विरमा देखिने छायाँमा समेत फरक-फरक छायाँको प्रकृति देखिएकाले उक्त छायाँ फरक-फरक कोणबाट दिइएको प्रकाश कारण देखिएको विशेषज्ञहरूको दावी छ । यता नाशाले भने चन्द्रमामा फरक-फरक ठाऊँबाट प्रकाश आउने गरेको बताएका छन् । उनले पृथ्वी र सूर्यबाट फरक-फरक आएको प्रकाशले त्यस्तो आकृती बनेको दावी गरेको छ ।
५.चन्द्रमा बाट लेइयेको भनिएको ढुंगा पृथीबि मा जताततै पाइने ढुंगा भन्दा फरक बिसेसता नभएको पाइएको छ |
Don't Miss it खान राम्रो संग चपाएर खाएमा फाइदै फैदा
Up Next कुन कुन खानेकुरा फेरि तताएर खानु हुदैन ? जान्नुहोस्
खाना खाँदा गरिने गल्तिहरु जसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ
कतिपय सामान्य आनीबानीले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कि, खाना खाने शैली, नुहाउने तरिका, हिँड्ने, सुत्ने,…
किन चिलाउँछ त हत्केला ? यस्ता छन्, हत्केला चिलाउने कारण
खानेकुराको एलर्जी खानेकुराको एलर्जीले पनि हत्केला चिलाउँछ । कसैकसैलाई कुनै खानाले एलर्जी ग¥योभने त्यसको असर हत्केलामा पनि देखिन्छ । मानिसलाई…
खाना खाँदा जहिले पनि ध्यान दिएर शान्तपूर्वक खानुहोस्
धेरै खाँदा तपाईंको पेटमा भार मात्र हुने होइन कि अल्छी र कमजोर पनि बनाउँछ । भोक लागेपछि मात्र खानुहोस् ।…